Madaxweyne Yuusuf oo doonaya in uu dib u dhigo Motionka ansixinta golaha wasiirada iyo xildhibaan Xasan Abshir oo raba in uu la wareego jagada madaxweynaha Puntland. Ruunkinet 04/12/07
Wararka ka immaanaya magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya inmadaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu qorsheynayo barnaamij dib loogu dhigayo ansixinta golaha wasiirada cusub.
Madaxweyne Cabdullahi Yuusuf ayaa la sheegay in uu ku raja xun yahay in la ansixiyo dowladda cusub ayadoo ay durba bilaabeen in wasiiradii uu soo dhisay qaarkood ay is casileen inta aan la gaarin kuwa mucaaradka ah.
Qorshaha madaxweynaha ayaa la sheegay in ay ka mid tahay in barlamaanka muddo la fasaxo asaga iyo ra'isul wasaarahana ay safar dibadda ah aadaan si loo kala furfuro golaha baarlamaanka kuwooda ka soo horjeeda ansixinta golaha wasiirada ama la daaliyo.
Sidoo kale, waxaa jira qaar ka tirsan golaha baarlamaanka oo si weyn u doonaya in maanta la keeno baarlamaanka motion si ay ugu codeeyaan riditaanka xukuumadda cusub.
Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay magaalada Garowe ee Puntland ayaa tibaaxaya in xildhibaan Xasan Abshir uu u ol oleynaya sidii looga dhigi lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee uu xukumo Cadde Muuse.
Xasan Abshir ayaa oo markii hore doonayay in laga dhigo wasiirka maaliyadda ayaa la sheegay in uu jagada madaxweynaha Puntland u hanqal taagay kadib markii uu arkay in jufadiisa aysan wax weyn ka ahelin dowladda federaalka ah iyo tan Puntland asagoo ku andacoonaya in jagooyinka sare ee labada maamul ay qaateen Cabdullahi Yuusuf iyo Cadde Muuse.